Kismaayo News » Kenya iyo Soomaaliya oo dhexdhexaadinaysa ONLF iyo Itoobiya (+Sawiro)
Kenya iyo Soomaaliya oo dhexdhexaadinaysa ONLF iyo Itoobiya (+Sawiro)
Kn: Wada xaajood lagu soo afjarayo colaadda gaamurtay ee ragaadisay gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa magaalada Nairobi uga socday sadexdii maalmood ee ugu danbaysay dawladda Itoobiya iyo ururka ONLF.
Wada hadallada oo wareegyadii hore ay dhexdhexaadinaysay dawladda Kenya ayay dawladda Soomaaliyana ku soo biirtay waxaana la filayaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo.
Labada dhinac ee la heshiisiinayo ayaa dhanka Itoobiya waxaa hogaaminayay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar halka dhinaca ONLF uu hogaaminayo hogaanka arimaha dibadda Cabdiraxmaan Sh. Maadeey.
Dawladda Kenya ayaa waxaa wada xaajoodka ku matalayay madaxweynaha maamul gobolleedka Gaarisa Cali Bunow Qorane ayadoo gadaal uu kaga soo biiray hogaamiyaha xisbiga talada haya Aadan Barre. Sidoo kale waxaa wada xaajoodka ku jiray jilib culus ay kamid yihiin Senator Yuusuf Xaaji, Xildhibaan Yuusuf Xasan Indha-gamuun iyo danjire Maxamed Cabdi Afeey.
Dhinaca Soomaaliya waxaa kaalinta dhexdhexaadinta u matalaya wafti uu hogaaminaayo madaxweynaha maamul gobolleedka Jubbaland, Axmed Madoobe. Ayadoo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay soo dhawaynayaan in xal waara laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee galaaftay naf iyo maal badan ayaa hadana waxaa dadku aad u hadal hayaan wafuudda sadexda dal matalaysa iyo waliba tan ururka ONLF oo isku hal beel ka soo jeeda marka la tixraaco nadaabka qabaa’illada ee Soomaalidu ku dhisantahay, taasi oo dadku ay fasiladdo kala duwan ka bixinayaan.
Waxaa muuqata in waa cusub u baryaayo Geeska Afrika hadii xal waara laga gaaro colaadda gacan ka hadalka ee soo jiitantay, waxayna horseedi kartaa in dadku u jihaystaan ka faa’iidaysiga khayraadka Guuliheen ku manaystay Gayiga.